Ekpere ọbara Kraịst. ? Maka ụmụaka na nchekwa
9 Mingụ Nkeji
Ekpere nke obara Kraist. N'ime ihe niile anyị nwere na Churchka Katọlik, ọbara Kraịst bụ otu n'ime ihe kachasị ike na ọ bụ ya mere enwere ekpere nye obara Kraist.
Ọ bụ ihe dị ndụ ruo taa, n’ihi na ọ ka bụ aka n’aka ọnya nke Jizọs Kraịst bilitere. Okwukwe anyị na-eme ka onyinyo nke Jizọs dịgidere n’obe ebe ọbara ya na-agba maka ịhụnanya maka mmadụ.
Ihe ọ bụla anyị rịọrọ, anyị kwenyere na ike nke Kristi nwere ike zuru oke inye anyị ihe anyị na-arịọ.
Enwere ike ikpe ekpere n’ebe ọ bụla ma ihe niile achọrọ bụ ịnwe okwukwe na enyere anyị ọrụ ebube.
1 Ekpere nke ọbara Kraịst ọ dị ike?
1.1 Ekpere nke Kraist maka umuaka
1.2 Kpee ekpere ọbara Kraist maka ihe isi ike
1.3 Ekpere diri obara Kristi iji chupu nsogbu
1.4 Nke nchebe site n’ọbara nke Kraịst
1.5 Ekpere maka ubochi niile
Ekpere nke ọbara Kraịst ọ dị ike?
Ekpere ị na-ekpegara Chineke dị ike.
Ọ bụrụ n’eji okwukwe ekpee ekpere, ị ga-enwe ihe ị na-achọ.
Nwee okwukwe ma kwere na ike nke Dinwenu anyi Jesu Kristi.
Ekpere nke Kraist maka umuaka
Nna m, abịara m ịrịọ gị arịrịọ na ịrịọ gị ka ị nụrụ olu m, obi erughị m ala, na-arịọchitere m arịrịọ ka nwa m nwoke wee hapụ ụlọ ọrụ ọjọọ, ghara ịdaba na ị ofụ ọgwụ ọjọọ, ọ na-esokwa ọzọ ụlọ akwụkwọ, a na m eji obi m nile rịọ gị maka ike nke ọbara Jizọs Kraịst, Onyenwe anyị, mee ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ ọzọ.
Dinwenu, Nna nke Eluigwe, mee ka mkpụrụ obi nwa anyị dị ọcha, sachapụ ihe ọjọọ, ịkpọasị, iwe, egwu, nhụjuanya, owu ọmụma, mwute na ihe mgbu ... site na ọbara gị, anyị na-arịọ gị ka ị gbanwee ya ka ọ bụrụ onye hụrụ ndị ọzọ n'anya. , obi ụtọ, ịdị jụụ, dị obiọma, na-enweghị egwu, nke na-enyefe ịhụnanya, n’enweghị nhụjuanya, na-akpụzi mmụọ nsọ ya site n’ọbara gị dị oke ọnụ ahịa.
Chineke nwere obi ebere, gị onye maara ihe niile, onye na-ahụ ihe niile, nye anyị amamihe maka na anyị bụ nne na nna anyị bụ ụmụ na anyị chọrọ ịdịkwu mma, nyere m aka ịghọta ha, anyị maara afọ ole ị dị, na mgbe ha zuru ike na / ma ọ bụ na-enupụ isi.
Oh, ọbara di nma nke Jịsọs Kriast wụsara Jizọs, n’elu nwa anyị, ọbara gị a gọziri agọzi ma mee ka ọ dị ọcha, ka o wee nye ya ike.
A na m ajụ gị site omimi nke ịdịnyere m.
Nwere ike ikpe ekpere nke ọbara nke Kraịst maka ụmụaka na nwa gị.
Withmụaka nwere ọtụtụ ihe mara mma nke gaara emere anyị. Ndi mkpụrụ osisi nke ịhụnanya anyị anyị anabatakwa ha n’ụwa nke a jikwa ọ joyụ zuru ezu na okwukwe na ihe niile ga-abara ha uru na ndụ.
Mana enwere oge anyị, dịka ndị nne na nna, nwere ahụmịhe dị ndụ na-atọ ụtọ na nke ahụ bụ mgbe ọbara nwere ike Kraịst Ọ bụ naanị olileanya anyị nwere.
Rịọ ụmụ anyị bụ ọrụ siri ike nke anyị nwere ike ịme.
Kpee ekpere ọbara Kraist maka ihe isi ike
Gi ọbara nke Jisos Kraist di nma! Mejuputa ọbara, nke madụ na nke Chukwu, sachaa m, sachapụ m, gbaghara m, juputa ọnụnọ gị; Ichacha ọbara na inye gi ike, ekowara m gị n ’ihu Eucharist gị n’elu ebe-ichu-aja, ekwere m n’ikike gị na ụtọ gị, ekwere m ntụkwasị obi na ị chebe m pụọ n’ihe ọjọọ niile, a na m arịọ gị ihe omimi nke m: banye n’ime mkpụrụ obi m na Ghichaa ya, jupụta n’obi m ma suye ya ọkụ.
Dị oke ọnụ ọbara a wụsịrị n'obe ma na-akụ n'ime Obi dị Nsọ nke Jizọs, a na m akpọrọ gị isiala nye gị n'ịkwado otuto na ịhụnanya m, a na m ekelekwa gị Onyenwe gị Ọbara gị na ndụ gị kemgbe e nyere anyị, a zọpụtara anyị ma anyị nweta ihe nchebe n'ihu Ihe ọjọọ niile gbara anyị gburugburu.
Oh Jesus, onye nyeworo m onyinye dị oke ọnụ ahịa nke ọbara gị, na Calvary, jiri obi ike na onyinye afọ ofufo, sachapụ m nsacha niile ma wụsara ụgwọ ọrụ mgbapụta m; O Kristi Jesus, onye n’elu ebe ịchụ aja bụ ndụ m, ị na-akọwara m ndụ, ị bụ isi mmalite nke amara niile amara, na onyinye dị ukwuu nke Chukwu nyere ụmụ ya, ị bụ nnwale na nkwa nke ternalhụnanya ebighi ebi n’ebe anyị nọ.
Enwere m obi ekele maka ohere niile a zọpụtara m ma jiri ike gị na ike gị, nke na-akwagide m n'ụzọ zuru oke nghọta banyere adịghị ike m, nke m na-adịghị ike na ike gị ichebe m n'ihe ọjọọ nke gbara m gburugburu. Ekwensu nke na-eyikwasị anyị uwe karịrị ike na ohere anyị.
Daalụ maka ịbụ Ọbara Royal nke napụtara ndụ anyị n'ọchịchịrị na site na ngwa nke ihe ọjọ na-abịakarị imerụ anyị ahụ.
Ọbara Kraist tolitere n’oge ahụ o nyere ndụ ya maka ịhụnanya nke mmadụ ma n’ime ya ike nke Chineke nyere anyị ọrụ ebube dị anyị mkpa.
Ha nwere ike ịbụ arịrịọ siri ike. Ezigbo miracles ebube ebe where b only na ike karuralr act ike nwere ike and mee ihe ah that wee b be ike nke Christbara Kraist.
Emere n’ekpere a na ezin’ụlọ ma ọ bụ enyi, ihe dị mkpa bụ ịmara na anyị ga-ekwere, nke ahụ bụ ihe na-ekwe nkwa na ekpere ahụ dị irè.
Ekpere diri obara Kristi iji chupu nsogbu
Nsogbu, n'ọtụtụ oge, na-ehichite n'ime anyị ma merụọ gị ahụ. Anyị na-ehi ụra abalị naanị iche banyere ọnọdụ nsogbu anyị nwere, nke a na-ewetara anyị nsonaazụ anụ ahụ na-akpasu iwe.
Inwe ike ịchụpụ nsogbu ndị dị na mpụga anyị, site n'ụlọ anyị na ọbụna n'èzí ndị ikwu anyị bụ ọrụ dị mkpa na nke a ike nke ọbara nke Kraịst nwere ike inyere anyị aka.
Jiri arịrịọ a akọwapụtara kpee ekpere ma kwenye na nzaghachi nke Onye-nwe na-aga.
Nke nchebe site n’ọbara nke Kraịst
Onyenwe anyị Jizọs, n'aha gị, na ike nke ọbara Gị Dị Oké Ọnụ Ahịa, anyị na - akanye mmadụ niile, eziokwu ma ọ bụ ihe omume ọ bụla nke onye iro chọrọ imerụ anyị ahụ.
Site n'ike nke Ọbara Jisus, anyị na-emechi ike mbibi nile dị n'ikuku, n'elu ụwa, na mmiri, n'ọkụ, n'okpuru ala, n'ike mmụọ nke okike, n'ime omimi ala mmụọ, na ụwa nke anyi ga aga na ya taa.
Site n'ike nke obara Jisos anyi ji ebiji nnyonye anya na oru ojo nke ojo.
Anyị na-arịọ Jizọs ka o ziga Nwa A gọziri agọzi n'ụlọ anyị na ebe ọrụ anyị nke Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael na ụlọ ikpe ya niile na Santos Angeles.
Site n'ike nke Ọbara Jizọs, anyị ji akara akara ụlọ anyị, ndị niile bi na ya (kpọọ onye ọ bụla n'ime ha), ndị mmadụ nke Onyenwe anyị ga-ezite ya, yana nri, na ngwongwo ndị Ọ na-eji mmesapụ aka eziga anyị maka anyị nkwado.
Anyị jiri ike nke ọbara Jizọs kpuchie ụwa, ibo ụzọ, windo, ihe, mgbidi na ala, ikuku anyị na-ekuru na okwukwe anyị na-edobe ọbara Ya gburugburu ezinụlọ anyị dum.
Site n'ike nke obara Jisos anyi kpuchie ebe anyi gaje ime taa, ya na ndi mmadu, ulo oru ma obu ulo oru ndi anyi ga - eso mee (aha onye obula n’ime ha).
Site n'ike nke ọbara Jizọs anyị ji arụ ọrụ na mmụọ anyị, azụmahịa nke ezinụlọ anyị dum, na ụgbọ, okporo ụzọ, ikuku, okporo ụzọ na ụzọ ọ bụla anyị ga-eji rụọ ọrụ.
Site n'ọbara Gi di oke onu ahia ka ayi jiri akara, obi na ndi nile bi na isi nke ala anyi mee ka udo na obi gi buru eze n’ime ya.
Anyi n’ekele gi Dinwenu maka obara gi na ndu gi, nihi na ekele ha azoputala anyi, echekwa anyi na ndi ojoo.
Ekpere nke nchebe site n’ọbara nke Kraịst siri ike!
Anyị nwere ike ịrịọ ka ike nke Kraist kpuchie anyị dịka akwa nke na-echebe anyị gburugburu ka ajọ onye ahụ ghara imetụ anyị aka. Anyị onwe anyị ma ọ bụ ụmụ anyị ma ọ bụ onye ọ bụla n'ime ezinụlọ na ndị enyi anyị.
Dị ka ọ mere na agba ohu nke fesasasara ọbara n’elu ogwe ụlọ nile dị ka ihe nnọchianya nke nchebe, n’otu aka ahụ, anyị ji okwukwe na-arịọ taa Ejiri ọbara ọbara nke Kraịst n'ọnụ ụzọ ụlọ anyị na banyere anyi na chebe anyị pụọ n'ihe ọjọọ niile.
Ekpere maka ubochi niile
Chinekem bia na aka m, Onye-nwe, mee ngwa nyere m aka.
M na-akpọ ike dị egwu nke Mgbapụta Mgbapụta nke Kraịst, Eze nke eluigwe na ụwa na Eze ndị eze.
N’aha nke Chineke Nna, n’aha Chineke Ọkpara na n’aha nke Chukwu Mmuo Nso: site n’ike nke obara Jisos Kraist Onye-nwe-ayi, achi m, kpuchido, kpuchido, kpuchido, uche m, amaghi ihe, ndum-n’uche, na uche m, obi m, mmetụta m, uche m, anụ ahụ m, echiche m, ihe m na mmụọ m.
Ihe niile m bụ, ihe niile m nwere, ihe niile m nwere ike, ihe niile m maara na ihe niile m hụrụ n’anya ka ejiri ike ọbara nke Jizọs Kraịst Onye-nwe kpuchie ma chekwaa ya. Chinekem, bia nyere m aka, Onye-nwe, mee ngwa nyere m aka.
A na m kaa akara m gara aga, oge m na ọdịnihu m akara, m na -achụchi atụmatụ m, ebum n’obi m, nrọ, echiche efu, ihe niile m na-eme, ihe niile m na-amalite, ihe niile m na-eche ma na-eme, a kara akara nke ọma ma chebe ya site n'ike nke Ọbara Jizọs Kraịst Chineke. Chinekem, bia nyere m aka, Onye-nwe, mee ngwa nyere m aka.
Akara m onye m, ezi na ụlọ m ihe m, ụlọ m, ọrụ m, azụmaahịa m, osisi ezinụlọ m, tupu na mgbe ọ bụla, ejiri ike nke ọbara Jizọs Kraịst Onye-nwe kpuchie ma chekwaa ya.
Ezoro m onwe m ọnya nke merụrụ ahụ nke Jizọs, m zoo onwe m n'ime Obi Obi adịghị Oke nke nwanyị a gọziri agọzi Mary, ka ihe ọ bụla na onye ọ bụla ghara imetụta m na ajọ omume ha, okwu ọjọọ ha na omume ha, ya na echiche ọjọọ ha ma ọ bụ nke aghụghọ ha. nke mere na onweghị onye nwere ike imerụ m ahụ na ndụ mmetụta uche m, na akụ na ụba m, na ahụ ike m, site na ọrịa ha zitere, ya na anyaụfụ ya, na anya ọjọọ ya, asịrị na nkwutọ, ma ọ bụ anwansi, ịkọ nkọ, ịkọ nkọ ma ọ bụ hexes.
Emechiri obim nile, ihe nile gbara m gburugburu ka akara, Mu onwem,. Echere m rue mgbe ebighi ebi site n’ọbara dị oke ọnụ ahịa nke Onye Mgbapụta ayị.
Kpee ekpere na ekpere Ọbara nke Kraist maka okwukwe kwa ụbọchị.
Nke a bụ omenala na - enyere anyị aka ime ka okwukwe anyị na ezinaụlọ dịkwuo mma, na-emekwa ka ịdị n'otu na mmụọ nke onye ọ bụla nọ n'otu.
Enwere ike ịme ya n'ụtụtụ iji gosipụta ụbọchị ọhụrụ n'ihu ọnụnọ nke Chineke dị ike niile. Can nwere ike ime usoro ikpe nke ụbọchị itoolu ma ọ bụ kpee onwe gị. Ihe dị mkpa abụghị ịkwụsị ime ya.
E nwere ọgbọ ebe okwukwe siri ike ịgbaji ma ọ bụ n’oge ahụ ebe ekpere ụbọchị niile na-amalite ịmị mkpụrụ. Askrịọ nke a site n'ọbara nke Kraịst, ka ọ bụrụ ụbọchị a gọziri agọzi dị mkpa ma dị ike.
Ikwere mgbe nile na obara nke ekpere Kraist nwere ike.